Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo waddo qorshe lagu hormarinayo ganacsiga Puntland. – Radio Daljir
Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo waddo qorshe lagu hormarinayo ganacsiga Puntland.
Oktoobar 15, 2012 2:50 b 0
Garowe, Oct 14 – Wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland ayaa wadda tallaabooyin lagu maaggan yahay kobcinta iyo hormarinta dhaqaalaha Puntland, gaar ahaanna sidii labo-lixaadin lahaa ganacsida Puntland.
Tallaabo-qaadka qorshahaasi ayay wasaaraddu ka bilawday kulamo iyo la tashiyo ay la yeelanayso ganacsatada Puntland, iyadoo wada hadallo shireed oo arrinkaasi la xiriirna ay ka dhaceen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Puntland Cali Axmed Gammuute, oo u warramay Radio Daljir ayaa sheegay hawlaha hadda ay wadaan in looga golleeyahay dhaqan-galinta himilooyin dhawr ah oo u cayiman wasaaraddiisa, kuwaasi u gun-dhig u ah horay u dhaqaaqa hormarka ganacsiga Puntland.
Md. Gammuute, waxaa uu intaasi ku daray kulamadii wasaarad ahaan ay la yeesheen ganacsata in lagu meeleeyey arrimo muhiim ah oo ay ugu horrayso jeexidda dhabbihii lagu socon lahaa inta lagu hawllan yahay qorshaha dardargalinta ganacsiga, iyadoo loo ballamay iskugu imaatinka kulamo kale oo ah dhaqaajintii shaqada.
Ganacsiga ayaa Puntland u ah halbawle dhaqaale oo ay muhiim tahay in awoodda la saaro kobocisii.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag oo xilka la wareegay